मनोजले म्युजिक भिडियो मार्फत आफ्नो समुदायको प्रेम कथालाई सम्झे – RadioMBC
Home > Front News > मनोजले म्युजिक भिडियो मार्फत आफ्नो समुदायको प्रेम कथालाई सम्झे
१४ माघ २०७४, आईतवार १२:१०
गायक तथा संगीतकार मनोज थापा मगरले म्युजिक भिडियो मार्फत आफ्नो समुदायको प्रेम कथालाई सम्झेका छन् । नेपाल आईडलका प्रतिष्पर्धी समेत रहेका मनोजले सो गीतलाई आफै गाएका हुन् ।
मगर समुदायमा निकै प्रचलित प्रेम कथा हो ‘भैना’ । बिहे हुनुभन्दा पहिले काम बिशेसले आफू कतै जानु पर्यो भने, प्रेमीले प्रेमिकालाई रुमाल अथवा कुनै सामान ‘भैना’ दिएर छोड्ने चलन छ । त्यही ‘भैना’लाई आफ्नो प्रेमीको बिश्वाश सम्झेर प्रेमीले कुर्ने पर्ने चलन निकै पहिले देखि अहिले पनि गाउँ घरमा चल्दै आएको छ । प्रेमीले पनि त्यही ‘भैना’लाई सम्झेर जहाँबाट भएपनि फर्केर आउनु पर्ने हुन्छ । यी सम्सामुहिक कथालाई मनोजले पांच मिनेटको भिडियोमा समेट्न सफल भएका छन्।
भिडियोमा पछिल्लो समय साहित्यकार कुमार नगरकोटीले लेखेका ‘लालपुर्जा’ फिल्म र म्युजिक भिडियोहरुमा देखिदै आएकी मिरुना मगरले अभिनय गरेकी छिन । मिरुना भन्छन, ‘आफ्नो समुदायको प्रेम कथा कस्तो थियो र कसरी प्रेम गरिन्छ ? भन्ने मलाई थाहा थिएन । आफ्नो पनलाई बिर्सिरहेको भेला मनोज दाई र फिरज दाईहरुले यो गीतमा मलाई अभिनय गर्नदिनु भएकोमा धन्याबाद दिन चाहन्छु ।’ उनले भने. ‘काम राम्रो भएको छ । पक्कै पनि दर्शकहरुले मन पराइदिनु हुन्छ ।’
नायिका मिरुना मगरलाई गायक तथा संगीतकार मनोज थापा मगरले साथ दिएका छन् । मनोज भन्छन. ‘यो लोक जनराको गीत हो । भिडियोको प्रेम कथा मगर समुदायकोको भएपनि गीत सम्पूर्ण नेपालीको हो । हामीले सम्पूर्ण नेपालीले हेर्न र सुन्न सक्ने गरी बनाएका छौ ।’ उनले भने, ‘यो गीतमा हामी निकै लामो समय सम्म अनुसन्धान गरेका थियौ । धेरै मेहेनत पछि बल्ल बाहिर ल्याउन सफल भएका छौ ।’
जनवरी २६ मा भिडियोलाई युट्युब मार्फत सार्बजनिक गरिएको थियो । भिडियोलाई फिरज अर्पणले छायांकन सम्पादन र निर्देशन गरेका हुन् । गीतलाई एरेन्ज भने रिकेश गुरुङले गरेका छन् ।
गीत कृपा डिजिटलमा रेकर्ड गरिएको थियो।
बिश्व मधुमेहको दिवसको अवशरमा तिलोत्तमा ५, मणिग्राममा निशुल्क मधुमेह शिबिर सम्पन्न